Maqaallo Archives - Soomaal Media Group
in : Ganacsiga, Maqaallo, Wararkii ugu dambeeyey
Ankara (SMG) – Shirkada maamusha dekadaha dalka Turkiga ee Albayrak iyo dowlada federaalka ah ee Soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis siinaya shirkada heshiis 14 sanno oo cusub ah oo ay ku maamusho Dekeda Muqdisho. Saxiixa Muqdisho wuxuu daba socday wada-hadallo taxane ah oo dib-u-eegis lagu sameeyay hannaanka wadaagga dakhliga ee labada dhinac. Heshiiska oo ay saxiixday Wasiirka Dekedaha Soomaaliya Maryam …
Kenya oo qaadeysa duulaan ciidan oo ka dhan ah dowladda Soomaaliya. Warbixin
in : Maqaallo, Wararkii ugu dambeeyey
Nairobi (SMG) – Kenya ayaa qoraal hanjabaad ah u dirtay Soomaaliya, sida uu shaaciyey wargeyska African Intelligence ee saldhigiisu yahay Magaaladda Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. Farriinta Kenya oo ah digniin iyo cagajugleyn ayaa ku taariikheysan 2-dii bishaan October waxaana wasiirka arrimaha dibedda Kenya Raychelle Omamo ay ku hagaajisay dhigeeda Soomaaliya wasiir Axmed Ciise Cawad Hanjabaada ayaa salka ku heysa …
Muruqa Diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee Soomaaliya, ayaa ka wanaagsan duqeymaha Drones-ka
Washington (SMG) – Muruqyada Diblomaasiyadeed ee Mareykanka ee rogrogmaya ee Soomaaliya ayaa ku guuleysan kara wax ka badan Duqeymaha Diyaaradaha Droneska ka geystaan Soomaaliya. In kasta oo ay jiraan dadaallo uu wado Mareykanku, dagaalka ka dhanka ah kooxda al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa si gaabis ah ku socday tan iyo 2016. Waxaa sabab u ah kala daadsanaanta mas’uuliyiinta dowladda …
Saameynta Sirdoonka aan muuqan ee Muqdisho
Muqdisho (SMG) – Warar lagu kalsoonahay ayaa muujinaya in labadii sanno ee la soo dhaafey dowladda dhexe ee Soomaaliya qoratey kumanaan ciidamo dharcad ah kuwaas oo Magaalada Muqdisho ka howgala. Ciidamadaan oo dadka Muqdisho u bixiyeen xoogaga aan muuqan, waxay ka howlgalaan degmooyinka caasimadda iyo goobaha shacabku ku badan yahay, sida suuqyada iyo wadooyinka muhiimka. Asbuucii la soo dhaafey qarax …
Walaaca sicir barar ku dhuftey deegaanada Puntland oo xoogeystay
Bososaso (SMG) – inta badan deegaanada Maamulka Puntland ee Soomaaliya ayaa galay qalqal dhaqaale kadib markii uu cirka isku shareeray sarifka lacagta qalaad ee doolarka marka loo eedo Shillinga Soomaaliga oo liita. Qayla dhaantu waxay billaabatay asbuucii hore taasoo sii xoogeysanaysa waxayna dadku muujinayaan walbahaar iyo rajo xumo. Masuuliyiinta Maaliyadda Maamulka dhexe ee Puntland ayaa iyaguna muujiyey walaac xoog leh. …
Maroodiga yar yar oo dib u soo laabanaya. Noocyada lumay
Jabuuti (SMG) – In ka badan 50 sanno, noolaha loo yaqaano Seenjiga, cabbir ahaan la eg-jiirka ama doolliga Soomaaliya waxaa loo heystay inuu yahay nuuc lumey. Laakin arrintu sidaas ma ahan hadda. Baarayaal caalami ah ayaa dhawaan arkay noolaha loo yaqaano Seenji Soomaali , oo ah nooc ka mid ah maroodiyaasha maroodiga, oo aan joogin Soomaaliya – laakiin ku sugan dalka …
Sida Iran hubka ugu gudbiso Xuutiyiinta Yemen
Sanca (SMG) – Koox burcad ah oo hubka sharci darrada ah u dusiya dalka Yemen kuwaas oo la qabtay ayaa shaaca ka qaaday sida dowladda Iiraan hubka u siiso maleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen iyagoo u sii maraya saldhig ay ku leeyihiin Soomaaliya. Xogtaan ayaa sheegaysa in Xuutiyiinta ey saboolnimada uga faa’iideysataan dad loo ekeeysiiyey Kalluumeysato hase ahaatee shaqadoodu tahay soo gudbinta …